Axmed Siciid Cige oo ka hadlaya waayo aragnimadiisa 20kii sano ee uu BBC la shaqaynayey - BBC News Somali
Image caption 42 sano ayuu Axmed ku jiray hawlaha saxaafadda
Somaliland oo anigu aan uga soo warramo BBC waxaa madaxweynaheedii xilligaas, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, iyo baarlamaanka iyo guurtiduba ay go'aamiyeen in qofkii Somaliland u dhashay ee ka qayb gala shirka Carta ee dib u heshiisiinta Soomaaliya uu galay khiyaano qaran.
Lahaanshaha sawirka Axmed Siciid Cige
Image caption Cige iyo madaxweynihii hore ee Zambia Kenneth Kaunda, Hargaysa 2005.
Waxaan ka dusay xayndaabka hore oo waxaan hoos tegay diyaaradii, waxaana ii suurtagashay in aan diyaaradii gudaha u galo oo ku soo wareysto ninkii hogaaminayay wafdiga Jabuuti. Boliiskii garoonka ayaa i qabtay, waxayna ii geeyeen saddex wasiir oo joogay garoonka oo arrinka u yimid, "aan xidhno weriyaha BBC" ayaa la yidhi, laakiin mid ka mid ah wasiiradii ayaa yidhi "waar warkiisii wuu haystaa Axmed ee aan inaguna dhinaceena u warrano". sidaasi ayaan ku helay warkii kowaad ee dhacdadaa oo galabtiiba ay sii daysay BBC.
Dhegeyso: Dhismaha waddada Beledweyne - Burco ee Shiinuhu uu dhisay 40 sano ka hor iyo Cige
Dhacdo kale oo ahayd cahdigii madaxweyne Cigaal, waxay aad isu qabteen koox salaadiin ahayd oo siyaasiyiintii SNM badidoodu ka danbeeyeen, waxayna yidhaahdeen "shir beeleed ayaan qabaneynaa", laakiin Cigaal salaadiintii ciidanka ayuu ku dalbaday oo waxna xabsiga Hargeysa ayaa la dhigay, qaarna guri nin suldaan ahi deganaa ayaa ciidanku ku hareereeyeen.
Image caption Cige oo waraysanaya Daahir Axmed Faarax (DAF) oo ka mid ah mucaaradka Jabuuti
Waxaan u badheedhay in aan galo guriga salaadiinta lagu go'doomiyay anigoo ahaa weriyaha keliya ee dableydii ay wateen salaadiintu u ogolaadeen in aan galo gudaha guriga oo soo wareystay salaadiintii. Waxaan ka soo baxay gurigii anigoo iska qarinayay ciidamadii, warkiina BBC duhurkiiba waa aan ka sii daayay iyadoo dhinacii xukuumadana jawaabtoodii ku jirto warka.
Labada dhinacba isla galabtii lagu dhawaaqay natiijada doorashada ayaan lugaheyga ugu tegay oo ay i siiyeen (iiga warrameen) dareenkooda, weliba iyadoo taageerayaasha Axmed siilaanyo aad u kacsanaayeen, laakiinse uu isagu go'aan adag qaatay oo aqbalay natiijadii maalmo ka dib.
Image caption Cige iyo Zaynab Badawi
Waxyaabaha kale ee xusida mudan ee aan u soo joogay waxaa ka mid ahaa horaantii bishii Nofember 2017, oo fadhigii golaha wakiillada ay feedh iskala daaleen gudoomiyihii golaha, Cabdiraxman Cirro, iyo ku xigeenkiisii, Baashe Maxamed Faarax, iyadoo aan ahaa weriyaha keli ahaa ee barta sare ee ay fadhiyeen la saarnaa ee ka duubanayay codadka. Dad badan ayaa igu yidhi "maxaad u kala qaban weyday labada masuul adigaa ugu dhowaayee"? Waxaan ugu jawaabay "bal ka warrama haddii uu mid odhan lahaa weriyaha BBC ayaa ii qabtay ninka, yaa dib danbe ii aamini lahaa".
Image caption Axmed Siciid Cige iyo Faarax Lamaane oo isu diyaarinaya doodda murashaxiinta madaxweynenimada Somaliland, Hargaysa 9 Nofembar, 2017
Image caption Cige oo ka shaqaynaya warka imaatinka kaaliyihii xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Jendayi Frazer ay ku tagtay Hargaysa, Febraayo 2008
Ugu danbeyn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhegeystayaasha labaatankii sano ee la soo dhaafay iga dhegeysanayey BBC Somali iyo dhammaan shaqaalaha BBC, gaar madaxdii laanta soomaaliga ee BBC igu soo martay oo toddoba ah - Maxamed Cabdillaahi , Yusuf Garaad , Andres Ilves , Josephine Hazeley , Ibrahima Diane, Caroline Karobia , iyo Cabdillahi Cabdi Sheekh.